I-Landaise Guest House phakathi kwe-Ocean neHlathi
Labenne, Nouvelle-Aquitaine, i-France
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Francesca
Ukwakhiwa kwendlu yethu ebukekayo yase-Basque-Landes kuyakwamukela ukuze uhlale ngokuthula phakathi kolwandle namahlathi. Itholakala edolobhaneni laseLabenne, indlu yethu yezivakashi iyindawo ekahle yokushajwa kabusha amabhethri akho. Amakhilomitha angu-4 kuphela ukusuka olwandle namabhishi e-Landes, ungakwazi ukujabulela yonke impahla yesifunda. Indlu yethu yezivakashi ifaneleka ngokukhethekile abangane, noma umndeni onengane eyodwa noma ezimbili.
Indlu yethu enhle yezivakashi inegumbi lokuphumula elinekhishi elisebenzayo (uhhavini kagesi, ihhavini likagesi, i-microwave, isiqandisi), itafula lokudlela labantu abangu-4, kanye nombhede kasofa onethezekile. Indlu yokugezela ineshawa ebanzi, usinki, okomisa ithawula kanye ne-WC. Igumbi lokulala elingu-13 m2 lihlome ngezinto zokulala ezinhle (160x200 - omatilasi abasha, amaduvethi nezindlebe), ideski namawodilophu nendawo yokugcina impahla. Itafula langaphandle likuvumela ukuthi ujabulele ukudla kwakho ngaphandle futhi usebenzise ukukhanya okuhle ekupheleni kosuku kanye ne-aperitif! Isihlalo esiphezulu, umbhede wokuvakasha kanye nebhavu yezingane kuyatholakala uma ucela. Indawo izolile futhi umgwaqo uncane kakhulu. Itholakala kuphela ku-4km ukusuka olwandle, indlu yethu yezivakashi izungezwe ihlathi elincane elihle. Jabulela!
4.75(8 okushiwo abanye)
Indawo yokuhlala itholakala kumamitha ayishumi nambili ukusuka esigcawini sesonto kanye nemakethe, lapho kukhona futhi ipaki lezingane, inkantolo ye-pétanque kanye ne-Labenne pediment (udonga lokudlala i-Basque pelota). Izitolo zasendaweni (ibhikawozi, i-pizzeria, ihhovisi leposi) zingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Imakethe yemvelo neyendawo ibanjwa njalo ngoLwesine ntambama esigcawini sesonto kuze kube u-8pm (unyaka wonke).
Siyatholakala kukho konke ukuhlala kwakho ukuze sikusize noma nganoma yiluphi ulwazi.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R5410.
Hlola ezinye izinketho ezise- Labenne namaphethelo